Tahaka ny mahazatra dia fihaonana amin’ireo mpanatontosa sy mpanatalenta ny fotoana ary misy ny fifanakalozana traikefa amin’ireo matihanina. Ankoatr’izay dia misy ihany koa ny fifampiresahana amin’ny rehetra mba hampandrosoana ny sarimihetsika Malagasy. Mbola vitsy hatrany mantsy ireo liana ka ezaka tsy maintsy ataon’ny rehetra ny hampahafantarana ny sinema Malagasy izay mbola tsy tafarina hatreto. Na dia maro aza ireo manatalenta eto amin’ny firenena dia ilaina ilaina ny fahaiza-mandresy lahatra avy amin’ireo mpanatontosa sy mpilalao sarimihetsika. Nanambara mihitsy ny tompon’andraikitra ny tetikasa eo anivon’ny Cabinet Profiler sy ny openflex fa ny rehetra no tokony hiezaka amin’ny fampandrosoana ny sarimihetsika fa tsy ny mpilalao sy ny mpanatontosa ihany. Ilaina ny fifampizarana amin’ireo mpijery sy ny fitsikerana hanatsarana io sehatra io. Tsiahivina fa maimaim-poana avokoa ny fijerevana sy ny fandefasana ny sarimihetsika eny amin’ny OpenFlex mba ho tosika sy ho fitsinjovana ny mpisehatra amin’ny sarimihetsika Malagasy.